[အခန်းဆက်] ယောက်ျားလေးတွေလဲခန္ဓာကိုယ်အချိုးကျဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပဲ | yathar Magazine
မင်္ဂလာပါ။TOKYO ODEN BOYSရဲ့အားကီပါဗျာ! ကျွန်တော့်နောက်ကျောပြင်ကိုပဲပြပြီးစတင်မိတ်ဆက်ပါရစေ။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ဖက်တီးနင်ဂျာက၀ိတ်ချတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်ကတော့ပြောင်းပြန်! #ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် *[အခန်းဆက်] တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ဖက်တီးနင်ဂျာလို့ခေါ်ပါတယ်။ * ကိုဖတ်ပြီးကြပြီလား။
ကျေးလက်တောရွာမှာနေထိုင်တဲ့သာမာန်ပြည်သူတယောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခံပေမယ့်၊၆နှစ်အရွယ်မှာ ခုမမို့တိုကနေစင်ကာပူကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာသြစတြေးလျ၊ ထပ်ပြီး အမေရိကနိုင်ငံ……
အနောက်တိုင်းလူမျိုးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် အာရှလူမျိုးတွေကသဘာဝအားလျော်စွာအရပ်အမြင့်ကနိမ့်နေတတ်ပြီး အရပ်တူနေရင်တောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားထွားကြိုင်းမှုနည်းတဲ့အတွက် အာရှလူမျိုးတွေကညှပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ Smack Downနပန်းသမားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဗျ။
[Unicode] [အခနျးဆကျ] ယောကျြားလေးတှလေဲခန်ဓာကိုယျအခြိုးကဖြို့အရေးကွီးတယျဆိုပဲ
မင်ျဂလာပါ။TOKYO ODEN BOYSရဲ့အားကီပါဗြာ! ကြှနျတေျာ့နောကျကြောပွငျကိုပဲပွပွီးစတငျမိတျဆကျပါရစေ။
ပွီးခဲ့တဲ့အပတျဖကျတီးနငျဂြာကဝိတျခတြာနဲ့ပတျသကျပွီးဖျောပွခဲ့ပမေယျ့ကြှနျတျောကတော့ပွောငျးပွနျ! #ပွီးခဲ့တဲ့အပတျ *[အခနျးဆကျ] တှရေ့တာဝမျးသာပါတယျ။ ဖကျတီးနငျဂြာလို့ချေါပါတယျ။ * ကိုဖတျပွီးကွပွီလား။
ကြေးလကျတောရှာမှာနထေိုငျတဲ့သာမာနျပွညျသူတယောကျပဲဖွဈလိမျ့မယျလို့ထငျခံပမေယျ့၊၆နှဈအရှယျမှာ ခုမမို့တိုကနစေငျကာပူကိုပွောငျးရှနေ့ထေိုငျခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးမှာသွစတွေးလြ၊ ထပျပွီး အမရေိကနိုငျငံ……
အနောကျတိုငျးလူမြိုးနှငျ့နှိုငျးယှဉျကွညျ့ရငျ အာရှလူမြိုးတှကေသဘာဝအားလြျောစှာအရပျအမွငျ့ကနိမျ့နတေတျပွီး အရပျတူနရေငျတောငျခန်ဓာကိုယျကွှကျသားထှားကွိုငျးမှုနညျးတဲ့အတှကျ အာရှလူမြိုးတှကေညှပျနခွေငျးဖွဈတယျဗြ။
ရိုးရိုးရှငျးရှငျးပွောရရငျတော့ Smack Downနပနျးသမားတှရေဲ့ခန်ဓာကိုယျဖွဈဖို့ရညျရှယျလုပျဆောငျနတေယျဗြ။
ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက အမေရိကမှာ အပျော်တမ်းလက်ဝှေ့သမားလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်ရေး နှင့်ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာအများအပြားရရှိခဲ့ပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ကြွက်သားတွေဖွံ့ဖြိုးလာအောင် စားသောက်နေထိုင်ပုံနှင့် လေ့ကျင့်ပုံနည်းလမ်းများကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်!
အားကီ !!! အားကီ !!!
Hangover ဖြစ်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးများ